(1) Izitayile ezahlukeneyo kunye nexabiso elifanelekileyo lomzi mveliso.
(2) Umgangatho ophezulu kunye nokuphendula ngokukhawuleza ngaphakathi kweeyure ezingama-24.
(3) Ngaphezu kweminyaka eli-15 yamava silwenza.
Amaxabiso ethu anokutshintsha ngokuxhomekeke kubonelelo kunye nezinye izinto zentengiso. Siza kukuthumelela uluhlu lwamaxabiso oluhlaziyiweyo emva kokuba uqhakamshelane nathi ngolwazi oluthe kratya, okanye sixelele imodeli yeemveliso ozithandayo, emva koko siya kukuthumela ikoteyishini.
Ngaba unayo ubungakanani be-odolo encinci? Ngaba ndingadibanisa imibala?
Hlanganisa umbala kunye nezitayile kulungile kuthi.
Elide kangakanani isampuli yakho okanye imveliso ixesha phambili?
Isampulu: iintsuku ezi-3-7 emva kokuba yonke into iqinisekisiwe.
Imveliso yobuninzi: iintsuku ezingama-7-30, kuxhomekeke kuyilo.
Amaxesha akhokelayo asebenza xa (1) siyifumene idiphozithi yakho, kwaye (2) sinemvume yakho yokugqibela kwiimveliso zakho. Ukuba amaxesha ethu akhokelayo awasebenzi nomhla wakho wokugqibela, nceda uye kwiimfuno zakho ngentengiso yakho. Kuzo zonke iimeko siya kuzama ukulungiselela iimfuno zakho. Kwiimeko ezininzi siyakwazi ukwenza njalo.
Kuthekani ngolawulo lomgangatho?
Zonke iimveliso ziya kuhlolwa ngokungqongqo kwaye sithathe nayiphi na imveliso ukuthumela imvume ngaphambi kokuba zithunyelwe. Emva kokuba uvumile kwaye uvumele ukuthunyelwa ngenqanawa, siyazikhulula iimpahla.
Ewe. Sinokubonelela ngamaxwebhu amaninzi kubandakanya iziQinisekiso zoHlahlelo / ukuVumelana, i-Inshurensi, iMvelaphi kunye namanye amaxwebhu athunyelwa kumazwe angaphandle apho kufuneka khona.
Ngaba singatyelela umzi-mveliso wakho?
Siyakwamkela ngokufudumeleyo ukuba undwendwele umzi-mveliso wethu nanini na.
Unokwenza intlawulo kwiakhawunti yethu yebhanki: i-30% idiphozithi kwangaphambili, i-70% eseleyo kwikopi ye-B / L.
(1) Ukuba ufuna ukwenza iodolo encinci ngokuthe ngqo ungaya kwi-e-shop yethu eAlibaba: https://znsfashion.en.alibaba.com/
(2) Wamkelekile usithumelele i-imeyile okanye ushiye umyalezo wokudibana nathi ukuze ufumane ubuninzi.